चैत्र ९, २०७७ / सप्तकोसी अनलाइन
काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले खाजा मगाउनुभयो तर खाजा गलत आयो । गलत भन्नुको मतलब मम मगाउँदा चाउमिन आएको भने होईन नि । सामान्य गल्ती जस्तै तपाईंले शाहकारी खाजा मगाउनुभयो तर झुक्केर अर्कै पर्न गयो ।
तब तपाईं के गर्नुहुन्छ ? पहिलो त उक्त खाजा फिर्ता पठाउनुहुन्छ र पैसा पनि माग्नुहुन्छ । अर्को फेरि आफुले खोजेको खाजा मगाउनुहुन्छ । तर भारत उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा एक महिलाले जे गरिन्, त्यसले सबैलाई हैरान पारेको छ ।
त्यहाँ, एक शाकाहारी महिलाले पिज्जा मागेको थियो, तर कम्पनीले मांसहारी पिज्जा पठायो । महिलाले कम्पनीलाई उपभोक्ता अदालतमा लिएर गएकी छिन् । उनले कम्पनीले गरेको त्यस गल्तीका लागि क्षतिपूर्तिको रूपमा एक करोड माग गरेकी छिन् ।
ती महिला भन्छिन्, ‘मैले भोगेका क्षतिलाई पुनःप्राप्त गर्न हामीहरुले महँगो र गाह्रो चरणहरु पार गर्नुपर्यो ।’ समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार दीपाली त्यागी नाम गरेकी महिलाले यस्तो निवेदन दायर गरेकी हुन् ।
आफ्नो निवेदनमा त्यागीले ‘धार्मिक विश्वास, शिक्षा, पारिवारिक परम्परा, उनको अन्तस्करण र उत्तम छनौट’ को कारणले आफु शुद्ध शाकाहारी भएको दावी गरेकी छिन् ।
२१ मार्च २०१९ मा, दीपालीले परिवारका लागि पिज्जा आउटलेटबाट शाकाहारी पिज्जाको लागि अर्डर दिइन् । होली मनाएपछि पिज्जा ढिला आइपुग्यो तर तिनीहरूले यसलाई बेवास्ता गरे । पिज्जा आउने बित्तिकै, उनले शाकाहारी नभएको कुरा काटेर एउटा टोकेपछि थाहा पाइन् ।
त्यसपछि, उनीहरूले महसुस गरे कि पिज्जामा च्याउको सट्टा मासुका टुक्राहरू मिलाइएको थियो । उजुरी गर्ने दीपालीका वकिल फरहत वारसीले उपभोक्ता अदालतलाई भने कि दीपालीले तुरुन्त ग्राहक सेवाकर्तालाई बोलाइन र शुद्ध शाकाहारीको घरमा मांसहारी पिज्जा ल्याएर घोर लापरवाहीको मुद्दा दायर गरिन् ।
केही दिन पछि, पिज्जा आउटलेटमा प्रबन्धकले दीपालीलाई बोलाए र उजूरीकर्ताको सम्पूर्ण परिवारलाई निःशुल्क पिज्जा दिने वचन दिएका थिए । यद्यपि उजुरीकर्ताले उनलाई फेरि भने, ‘यो कुनै साधारण घटना होइन, हाम्रो धार्मिक भावनालाई चोट पुर्‍याएको छ ।’
यस पछि, पीडितको तर्फबाट दिल्ली उपभोक्ता फोरममा मुद्दा दर्ता गरियो । यसमा कम्पनीबाट जवाफ खोजिएको छ । यस मुद्दाको अर्को सुनवाई १७ मार्चमा हुँदैछ ।
बोलेर जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
प्याजको बोक्रा फाल्नु हुन्छ ? यस्ताे गल्ती नगर्नुस्
वाह्य दवाव, प्रभाव, प्रलोभन र सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो: पूर्वराज शाह (फाेटाे फिचर )
वेव सिरिज ‘काहानी हो यो प्रेमको’ को शुभमुहर्त
स्थानीय तहमा दमकल नहुँदा समस्या
सुनसरीमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले सकृयता बढाउँदै
इटहरीका इश्वर फागुन महिनाको उत्कृट प्रहरी घोषणा
इटहरीका राम निरौलाले प्रदेश १ कै ठुलो म्याराथुन २०२१ आयोजना गर्दै